Tijaabooyinka Cilmi-baarista Caafimaadka ee hadda laga heli karo Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka
Adduunku wax weyn buu ka bartay sanadkii la soo dhaafay muhiimada ay leedahay cilmi baarista caafimaad si loo horumariyo daaweyn caafimaad oo badbaado leh oo wax ku ool ah. Anaga oo ah PWH waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno ku biiristeenna cusub Cilmi baarista Aventiv. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan ku siino fursad aad kaga qaybgasho cilmi-baarista caafimaad ee dhimman. Tijaabooyinka caafimaad waa daraasado cilmi baaris cilmiyeed oo lagu sameeyo dadka waxaana loogu talagalay in lagu qiimeeyo daaweynta caafimaadka.
Kahor Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) wuxuu ansixiyaa tijaabada bukaan socodka si loo bilaabo, cilmi baarayaashu waxay sameeyaan tijaabooyin cilmiyaysan oo ku saabsan shaybaarada iyo daraasaadka xayawaanka si loo tijaabiyo amniga iyo waxtarka daaweynta. Haddii daraasadahaani ay muujiyaan natiijooyin wanaagsan, FDA waxay siineysaa oggolaansho faragelinta si loogu baaro aadanaha. FDA waxay bixisaa tilmaamo adag oo ku saabsan amniga iyo waxqabadka saxda ah ee tijaabada caafimaadka. Intaas waxaa sii dheer, tijaabooyinka cilmi baarista waxaa loo qaabeeyey laguna qabtay iyadoo la isticmaalayo heerar anshax taxaddar leh oo loogu talagalay ilaalinta mutadawiciinta
Daraasado ayaa hadda lagu qabtaa xafiiskayaga Jasonway waxayna ku lug leeyihiin daaweynta noocyo kala duwan walaaca caafimaadka haweenka. Waxaan hadda aqbalnaa mutadawiciin tijaabooyin ku saabsan barashada endometriosis, ka hortagga uurka ee afka, iyo welwelka galmada. Daraasadaha soo socda ayaa laga yaabaa inay bixiyaan daaweyn loogu talagalay calaamadaha menopausal, dhibaatooyinka kaadida, caabuqyada xubinta taranka haweenka, qanjirrada makaanka, ama dhiig baxa caadada oo culus. Intaa waxaa dheer, waxaan marwalba soo dhaweyneynaa weydiimaha ka yimaada maadooyinka caafimaadka qaba ee tijaabooyinka mustaqbalka. Markaad kaqeyb gasho waxaad heli doontaa daryeel caafimaad oo bilaash ah, helitaanka suurtagal ah ee daaweynta cusub, waxaadna kaa caawin kartaa faham dheeri ah oo ku saabsan caafimaadka haweenka Tabaruceyaasha ayaa dhaqaale ahaan loo magdhabaa kaqaybqaadashadooda.
Bixiyeyaashaada Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay taageeraan ku-xirnaanshaha cilmi-baarista socda si ay ugu horumariyaan sayniska iyagoo caawinaya bukaankooda iyo bulshada labadaba. Kaqeybgalka ama diidmada kaqeybgalka tijaabada cilmi baarista saameyn kuma yeelaneyso daryeelkaaga caafimaad ee joogtada ah ee bixiyaashaada PWH.
Aventiv Research waa hay'ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Columbus oo la aasaasay 2007 waxayna qabatay boqolaal tijaabo caafimaad. Cilmi-baarista Aventiv waxay ka caawisay 20 daaweyn cusub inay noqdaan FDA-la oggolaaday oo loo heli karo in la isticmaalo. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.aventivresearch.com ama adoo wacaya xafiiskayaga baaritaanka ee 614-495-8970. Booqashadaada xigta ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxaad sidoo kale la kulmi kartaa iskuduwayaashayada cilmi baarista si aad uga jawaabto wixii su'aalo ah.